जनताको सेवा गर्ने नेपाल प्रहरीका केही अधिकारीहरु नै सम्पर्क विहिन भएपछि प्रहरी कार्यालयले सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ । उनीहरु गत साउन महिनादेखि सम्पर्कमा छैनन् ।
सोमवार, अशोज ११, २०७८ ८:३०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। जनताको सेवा गर्ने नेपाल प्रहरीका केही अधिकारीहरु नै सम्पर्क विहिन भएपछि प्रहरी कार्यालयले सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ । उनीहरु गत साउन महिनादेखि सम्पर्कमा छैनन् । तीन महिना देखि सम्पर्कमा नरहेका ११ जनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचित गरेको छ । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
साफ च्याम्पियनसिप फाइनलमा नेपाली प्रशिक्षक अलमुताईरीलाइ साफले खेल मैदानमा छिर्न प्रतिबन्ध लगायो! भारतलाइ जिताउन साफको चाल
दसैंमा टीका लगाउँदा जप्ने मन्त्रको अर्थ के हो ? दसैं मन्त्र सहित
बाबुले छोराको हत्या गरे मासु कम दिएको भन्दै